Barnaamijyada - Qalabka Qalabka | Wararka Gadget (Bogga 3)
LEGO, waxay ku tartameysaa Windows 10 Mobile waxayna bilaabeysaa 3 kulan oo cusub
LEGO ayaa hadda sii deysay 3 ciyaarood oo cusub oo loogu talagalay barnaamijka 'Windows 10 Mobile platform', midkoodna la jaan qaada Windows 10 nooca desktop-ka.
Microsoft waxay ku cusbooneysiisaa sedexdeeda barnaamij ee Office-ka ah barnaamijka 'Android' iyadoo ay la socoto taageerada SVG
Sawirada SVG ama vector-ka waxaa horey loogu dari karaa Office for Android dhowr maalmood iyadoon Microsoft lagu soo wargelin.
Twitter wuxuu qirayaa inuu been abuurayo cabbiraadaha muuqaalka fiidiyowga
Dhowr saacadood uun ka hor Twitter-ka ayaa qirtay in, qalad ku yimid nooca Android ee barxadda, cabbiraadda fiidiyowga ay sii kordhayaan.
Android 7 wuxuu imaan doonaa bisha Janaayo Samsung Galaxy A5
Waxaan horeyba u haysannay xaqiijinta rasmiga ah ee imaatinka nidaamka cusub ee hawlgalka Android 7.0 ee Samsung Galaxy A5. The…
Ilaa $ 5 milyan maalintii adoo gujinaya xayeysiis been abuur ah
Koox Burcad-badeedda Ruushka ah ayaa maareynaya inay abuuraan nidaam ay ku khiyaanayn karaan warshadaha xayeysiinta ee ay ku kasbadaan malaayiin doollar maalintii.
Snapchat wuxuu bixiyaa miirayaal cusub iyo sidoo kale suurtagalnimada abuuritaanka kooxo
Snapchat ayaa hada soosaartay cusbooneysiin ku saabsan codsigeeda macruufka oo ay kujirto awooda abuurista kooxo iyo in la siiyo istiikarada lamid ah Prisma.
Windows 10 Abuuraha Cusboonaysiinta wuxuu ku siinayaa ikhtiyaar cusub oo aad dib ugu dajiso nidaamka
Shirkadda Microsoft ayaa go’aansatay inay ku darto hab cusub oo dib loogu soo celinayo kombuyuutarkaaga oo ku qalabaysan nidaamka Windows 10 si aadan u waayin faylashaada.
Facebook Messenger wuxuu sii daayaa shaandhooyinka kamaraddaada
Facebook Messenger ayaa dhawaan la cusbooneysiiyay si loogu daro filtarrada, looxyada iyo xulashooyin cusub oo loogu talagalay shaqada kamaradda.
DeepBach, waa sirdoon cusub oo macmal ah oo karti u leh curinta muusikada caadiga ah
Shaybaarada cilmi baarista ee 'Sony CSL' ayaa hadda soo bandhigay DeepBach, oo ah caqli macmal ah oo karti u leh sameynta muusikada caadiga ah.
Muuqaalka 'goor dambe' wuxuu yimaadaa Instagram
Instagram mar kale waxay cusbooneysiisaa barnaamijkeeda iOS iyo Android adoo ku daraya 'aqrinta dambe' hawsha oo aad ku calaamadin karto waxyaabaha aad dib ugu eegi karto goor dambe
Microsoft Edge sidoo kale wuxuu xayirayaa Flash cusbooneysiinta soo socota
Microsoft si loo joojiyo Taageerada Farsamada Flash iyadoo la sii daayo Windows 10 Abuuraha Cusboonaysiinta Studio
Nooca xiga ee WhatsApp ayaa kuu oggolaanaya inaad tirtirto farriimaha
Shaashado taxane ah ayaa muujinaya sida WhatsApp uga shaqeyn doono qaab cusub oo lagu tirtiro farriimaha la soo diray.
Kaydinta fudud iyo guuritaanka udhaxeeya iOS iyo Android mahadsanidiisa Google Drive
Google Drive ayaa la cusbooneysiiyay iyadoo u oggolaaneysa dadka isticmaala macruufka inay sameystaan ​​nuqullo nuqul ah taleefannadooda casriga ah iyo fududeynta u guurista Android
Wicitaanka fiidiyowga ee kooxda ayaa imanaya Slack
Slack, oo ah codsi caan ah oo loo yaqaan 'desktop desktop' oo loogu talagalay kooxaha shaqada, ayaa hadda ku dhawaaqay muuqaal cusub oo kuu oggolaanaya inaad sameyso wicitaanno fiidiyoow kooxeed
Waxyaabaha Android, nidaamka cusub ee hawlgalka Google
Google ayaa hadda ku dhawaaqday nooc cusub oo gaar ah oo Android ah, oo hadda la heli karo, oo loogu talagalay Internetka Waxyaabaha Masiixiyiinta u ah Android.
Skype hadda waxay awood u leedahay inay isku mar ku turjunto wada sheekaysigaaga sagaal luqadood
Microsoft ayaa hada soo saartay hawl cusub oo loogu talagalay Skype taas oo wada hadalada hada loogu turjumi karo waqtiga dhabta ah sagaal luqadood.
360-digrii fiidiyowyo toos ah ayaa yimaada Facebook
Facebook Live 360 ​​waa magaca adeegan cusub ee ay soo bandhigtay shabakada caanka ah ee bulshada lagu yaqaan halka aad kula wadaagi karto muuqaalo 360-degree ah.
Kiiboodhka Google Gboard wuxuu soo bandhigayaa aaladaha Android
Haa, waxay umuuqataa wax qariib ah laakiin kumbuyuutarkan oo in muddo ahba u jiray dadka isticmaala aaladaha leh nidaamka hawlgalka ...
YouTube hadda wuxuu kuu ogolaanayaa inaad horusocod ama dib udhacdo fiidiyoo hal taabasho ah
Gelitaan halka aan ka hadli doonno sida loo kiciyo shaqeynta si loo hormariyo oo dib loogu noqdo 10 ilbidhiqsi soo saarista fiidiyowga YouTube.
Baadhitaanka 'Surfy Browser' waa biraawsar shabakad cusub oo hagaagsan oo bilaash ah
Surfy Browser waa biraawsar leh qaabab taxane ah oo aan la iska indhatiri karin oo aad si bilaash ah ugu haysato Play Store-ka.
Ogeysii kuwa kuu dhow inay ku wanaagsan yihiin Xiriirada Google ee aaminka ah
Xiriirada la aaminay, saaxiib ama xubin qoyska ka mid ah ayaa codsan kara goobtaada saxda ah. Haddii aadan 5 daqiiqo gudahood ku soo jawaabin, si otomaatig ah ayaa loo wadaagayaa.
Hadda waxaad kala soo bixi kartaa bogagga shabakadda adeegsiga khadka tooska ah Chrome
Cusboonaysiintii ugu dambaysay ee loo yaqaan 'Chrome for Android' waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay soo degsadaan bogagga shabakadda si ay u eegaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin qadka.
Universe, waa barnaamij ay sirdoonka macmalka ahi ku isticmaali karaan kombuyuutar
Universe waa barxad cusub oo ay abuurtay OpenAI halkaas oo laga raadsado in nidaam kasta oo sirdoon farsameysan uu u isticmaali karo PC-ga sida aadanaha
Saddexda astaamood ee cusub ee Android 7.1.1
Android 7.1.1 wuxuu bilaabay inuu gaaro qalabka Nexus iyo waxyaabaha u cusub wuxuu keenayaa sedex muuqaal oo u gaar ah Google Pixel
Microsoft waxay daabacdaa Clip Lakabka on Android si loo hagaajiyo nuqul qoraalka
Microsoft ayaa gacanta ku haysa samaynta iyo daabacaadda barnaamijkan loo yaqaan 'Clip Layer', kaas oo mas'uul ka noqon doona soo guurinta dhammaan qoraalka aad ku haysato shaashadaada Android.
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa mar horeba ku isticmaali kara "Ok Google" Android Auto
Kaliya nasiib yar ayaa dooran kara inay isticmaalaan gacmaha-bilaashka ah "Ok Google" ee ku jira Android Auto markay baabuurkooda ku wadaan.
Google Chrome wuxuu si joogto ah u joojiyaa isticmaalka flash
Google ayaa hadda soo saartay cusbooneysiinta Chrome 55, oo ah nooc cusub oo Flash Player aan ugu dambeyn la taageerin.
Dhammaan mawduucyada SwiftKey ee lacag-bixinta ah hadda waa bilaash
Hadiyad ahaan Kirismas, dhammaan mawduucyada SwiftKey ee lacag-bixinta ah hadda waa bilaash. Kumbuyuutar ku daraya tayo sare leh faa iidadan weyn.
Ciyaarta Youtube ayaa maanta ka dhacday Spain
Waxaan maanta aragnaa war badan oo aad ufiican oo loogu talagalay dadka isticmaala ee ku nool Spain. Hada barnaamijka Google ...
Microsoft waxay shaaca ka qaaday in cusbooneysiinta Windows 10 ay kaa dhigeyso mid nugul
Microsoft waxay soo bandhigeysaa nuglaanta halista ah ee Windows 10 taas oo hacker uu kula wareegi karo kombiyuutarkaaga intaad cusbooneysiineyso
WhatsApp for iOS ayaa dib loo cusbooneysiiyay maanta
Cusboonaysiinta WhatsApp waxay ahaayeen kuwo joogto ah in muddo ah inkasta oo ay run tahay in dhammaantood ...
Instagram ayaa ku soo ogeysiin doonta haddii aad qaadato shaashad
Haddii aad wadahadal gaar ah oo kumeelgaar ah la yeelato isticmaale kale oo aad ka qaadatid shaashadda, waxaa lagu ogeysiinayaa barta Instagram.
Mashruuca NEON waa cusbooneysiinta Windows 10 ee hagaajin doonta adeegsadaha isticmaalaha
Microsoft waxay ka shaqeyneysaa waxa noqon doona cusbooneysiinta Redstone 3, iyada oo ka shaqeyneysa sidii loo hagaajin lahaa isdhexgalka isticmaalaha ee ka dhexjirayaasha.
Jaangooyaha Volume wuxuu kuu oggolaanayaa inaad jadwal u sameyso heerarka mugga sida waafaqsan waqtiga
App la yiraahdo Volume Scheduler ayaa awood u leh inuu si otomaatig ah u beddelo heerka mugga taleefanka casriga si fudud oo hufan.
[Soo Degso APK] Spotify wuxuu ku noqdaa bar-guurista hoose ee Android
Baarka cusub ee loo yaqaan 'navigation navigation' cusub ayaa laga heli karaa 'Spotify beta', kaas oo badalaya dhinaca marinka dhinaca ee Android
Kuwani waa dhammaan astaamaha cusub ee Fedora Linux 25
Kuwa mas'uulka ka ah horumarinta Fedora ayaa hadda ku dhawaaqay sii deynta nooca 25 ee nidaamka hawlgalka ku saleysan Linux ee caanka ah.
Kaspersky OS, nidaamka ugu amniga badan adduunka
Eugene Kaspersky wuxuu ka hadlayaa abuuritaankiisii ​​ugu dambeeyay, Kaspersky OS, oo ah midka lagu dhawaaqay inuu yahay nidaamka ugu amniga badan adduunka.
Dhawaan sidoo kale waxaad awoodi doontaa inaad ku shubto fiidiyowga WhatsApp
Cusbooneysiinta soo socota ee WhatsApp, codsiga farriinta deg degga ah ee caanka ah ayaa sidoo kale lagu sharxi doonaa bixinta fiidiyoowga.
Shirkadda bq waxay u diyaarisaa cusbooneysiinta Android 7.0 Nougat taleefannada casriga ah ee kala duwan
Shirkadda Isbaanishka ee bq ayaa isku diyaarineysa sanadkan 2017 cusbooneysiin cusub oo dhowr ah oo qalabkeeda ah, kuwanna ...
Bartamaha bisha, warar xan ah oo ku saabsan firfircoonida gudbinta ee ...
Isku xir dhammaan fariimaha SMS-ka dhammaan qalabkaaga adigoo adeegsanaya Pulse
Pulse waa barnaamij ku sifoobay maareynta dhamaan SMS-ka dhamaan aaladaha aad ku rakibtay.
Kooxda wax jabsata ayaa baaray inay dhowr milyan oo doolar ka xadeen Farsamada elektarooniga ah
FBI-da ayaa baareysa falalka koox burcad ah oo awood u leh inay ka xadaan lacag u dhaxeysa 15 ilaa 18 milyan oo doolar oo laga helo Farsamada elektarooniga iyadoo loo marayo FIFA.
WhatsApp ayaa ku dhawaaqday inay joojinayso xogta ay la wadaagto Facebook
Ugu dambeyntii, iyo dood badan ka dib WhatsApp, waxay umuuqdaan inay dib udhaceen oo xayireen, xilligan, isbeddelada xuquuqdooda asturnaanta.
Google wuxuu bilaabayaa PhotoScan si loo sawiro sawirada iyada oo loo marayo sawir xisaabeed
Haddii aad rabto inaad gacanta ku haysato qalab awood badan si aad u sawirto sawirro hore, PhotoScan-ka Google waa midka ugu habboon.
Firefox 50, oo ah nooc cusub oo biraawsarka ah oo hadda la heli karo
Firefox 50 hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo, nooc cusub oo ka mid ah biraawsarka webka oo ballan qaadaya nabadgelyo iyo xawaare dheeri ah oo ku socda bogagga rar.
Facebook wuxuu bilaabay qalad uu kaga tagayo kumanaan isticmaale ah meydadka oo uu ku jiro aasaasihiisii
Waxaan wajahaynaa guuldarro shabakadda bulshada ee Facebook oo jahwareer gelisay adeegsadayaasheeda iyo in hadda ...
Kuwani waa dhowr ka mid ah taxaddarrada uu Kim Dotcom u qaadi doono Megaupload-ka cusub
Kim Dotcom wuxuu mar labaad kahadlayaa mashruuciisa weyn, Megaupload 2.0, iyo qayb kamid ah taxadarka lagu qaadayo.
IOS waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku bixiso PayPal adoo la hadlaya Siri
Paypal ayaa mas'uul ka ahaa ku dhawaaqida in Apple ay go'aansatay inay dhexgaliso adeegyadeeda lacag bixinta elektarooniga ah ee iOS iyo Siri.
Xafiiska lacag bixinta ee qalabka shaashadda waaweyn
Waxaan ku aragnaa horumar weyn Xafiiska oo aan dhamaanteen ka helnay mahadnaq qeyb ahaan suurtagalnimada adeegsiga erayga, Excel ...
WhatsApp waxay ku kicineysaa nidaamkeeda amniga laba talaabo
WhatsApp wuxuu ku dhawaaqayaa in nidaam amni oo laba talaabo oo cusub oo qaas ah lagu tijaabinayo nooca beta ee barnaamijka.
TeamViewer wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u dirto shaashad iPhone ah Android
Codsiga caanka ah ee TeamViewer wuxuu hadda kuu oggolaanayaa inaad si toos ah uga dirto oo aad ula shaqeyso shaashadda iPhone-ka 'Android'.
CyanogenMod 14 oo wata Android 7.1 Nougat ayaa hadda diyaar u ah soo dejinta
CyanogenMod ayaa hadda sii deysay nooca 14 ee ROM-kiisa gaarka ah ee rakibidda, iyadoo hadda si toos ah loogu rakibay Android 7.1 Nougat.
Microsoft waxay sii deyneysaa cusbooneysiin cusub oo amniga ah oo loogu talagalay Windows
Microsoft ayaa hadda si rasmi ah u shaacisay inay horey u saxeen ciladdii lagu ogaadey firirkii nidaamka shaqadooda.
ICANN waxay labalaabaysaa dhererka furaha nidaamka DNS ee amniga
ICANN ayaa hada shaacisay in daraasad kadib la go'aansaday in la kordhiyo dhererka furaha dhamaan server-yada DNS.
Adobe VoCo, waa codsi kuu ogolaanaya inaad kula hadasho codka qof kale
Adobe ayaa hada soo bandhigtay VoCo, oo ah barnaamij ay macno ahaan shirkadu ugu xayeysiisay Photoshop-ka codadka iyo maqalka.
Waxay ogaadaan sida loo xado koonto Gmail habka hubinta isticmaalaha
Ahmed Mehtab wuxuu maareeyaa inuu abuuro nidaam uu adeegsade kasta ku xadi karo koonto Gmail ah.
Hadda waxaad ku diri kartaa Sawirro Live ah sida GIF-yada WhatsApp ee iOS
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyo, WhatsApp qalabka macruufka horeyba wuxuu kuu oggolaanayaa inaad u dirto Sawirro Live ah sida GIF dhammaan xiriirada aad rabto.
WhatsApp 'Xaaladda', nuqul cusub oo loogu talagalay Snapchat
Ma ahayn inaan sugno waqti dheer si aan u aragno sida WhatsApp ay u bixiso adeegyo cusub oo ka socda Snapchat, markan loo baabtiisay 'Xaaladda'.
Siri wuxuu ku laabanayaa sagxadaha shaqada si loo hagaajiyo shaqadiisa
Wararka xanta ah qaarkood waxay soo jeedinayaan in Apple ay si adag u shaqeyn doonto si ay Siri uga dhigto waxqabadkeeda iOS 11.
Google Chrome 53 ee Windows wuxuu balan qaadayaa inuu noqon doono 15% dhakhso
Kooxda horumarinta Google Chrome ayaa balan qaaday in nooca 53 ee mashiinka raadinta ee caanka ah uu 15% ka dheereyn doono midka hada socda.
LibreTorrent waa macmiil il furan oo aan xayeysiis lahayn oo loogu talagalay Android
Haddii aad raadineyso ili furan ilwareedka faylka furan ee furan ee ku jira Android, oo leh 'LibreTorrent' waxaad heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay.
Allo waxaa loo casriyeeyay 2.0 iyada oo leh Jawaabaha Tooska ah, Tooska wadaag iyo inbadan
Allo waa inuu sugaa Pixels inuu ku guuleysto meeraha, waxaan ku leenahay Hoy guriga ah waxaana jira adeegyo badan oo leh Kaaliye. 2.0 ayaa hadda la heli karaa
Tilmaamaha Android 7.1 Nougat hadda waxaa laga heli karaa Nova Launcher beta
Haddii aad rabto inaad ka hesho tuuriyadaha barnaamijyada Android 7.1 Nougat miiskaaga, ma jirto dariiq ka fiican oo loo maro Nova Launcher oo beta ah.
Microsoft waxay sii deyneysaa qalabkeeda Barashada Mashiinka
Shirkada Microsoft ayaa hada shaacisay ujeedkeeda ah inay siidayso qalab lagu barto Mashiinka si cidkasta oo horumarisa ay si xor ah ugu adeegsan karto.
Skype waxay soo saartay cusbooneysi cusub si ay ula tartanto nooca cusub ee WhatsApp
Microsoft waxay ku dhawaaqeysaa in todobaadyada soo socda isticmaaleyaasha Skype ee iOS iyo Android ay awoodi doonaan inay soo dejiyaan nooc cusub oo ka mid ah barnaamijkooda caanka ah.
Opera hadda waxay kuu oggolaaneysaa inaad si dhakhso leh u xoqdo ilaa 86%
Opera ayaa hadda ku dhawaaqday soo saarista nooca 41 ee biraawsarka webka caanka ah, oo ah cusbooneysiin si weyn kor ugu qaadaya noocii hore
Waxaa loo heli karaa qof walba nooca cusub ee nidaamka macOS Sierra 10.12.1
Apple waxay leedahay mashiinada ceejinta buuxda maantana waxay sii daayeen labadaba cusbooneysiinta iOS ...
Moto G4 iyo Moto G4 Plus ayaa dhawaan heli doona Android Nougat 7.0
Waa rasmi oo shirkadda Shiinaha ee Lenovo lafteeda ayaa xaqiijisay in Moto G4 iyo Moto G4 Plus ay heli doonaan ...
WhatsApp waxaa loo cusbooneysiiyay qalabka Android iyo iOS
Marka laga hadlayo adeegsadayaasha Android, cusboonaysiinta ugu dambaysa ee arjiga waxay timid Oktoobar 15 iyo…
Turjubaanka Skype wuxuu hadda taageeraa 9 luqadood
Adeegga tarjumaadda degdegga ah ee Skype Translator wuxuu hadda taageeraa sagaal luqadood, ka dib markii uu liiska ku daray Ruushka
Amazon, amniga, waxay u bedeshaa furaha kumanaan macaamiil ah
Shirkadda Amazon ayaa goordhow shaacisay inay qaadatay go’aanka ah inay furaha furaha u badalaan kumanaan macaamiil ah si ay u damaanad qaadaan amnigooda goobta.
Giphy Cam wuxuu ku degaa Android sida mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee lagu abuuro GIFs firfircoon
Haddii aad raadineyso app si aad u abuurto GIF-yada firfircoon oo aad ugala wadaagto WhatsApp, Giphy Cam ayaa ugu fiican oo hadda laga heli karaa Android.
Wadahadalka qarsoodiga ah ee Rasmiga ayaa ugu dambayntii gaadha dhammaan isticmaalayaasha
Sugitaan dheer kadib, 900 milyan ee isticmaaleyaasha Facebook Messenger waxay ugu dambeyn ku raaxeysan karaan wada hadalka sirta ah.
2-daqiiqo Podcasts leh Anchor, oo hadda laga heli karo Android
Barroosinka ayaa leh astaamo aad u wanaagsan tanina waa tan kuu oggolaanaysa inaad duubto 2-daqiiqo oo fiidiyowyo lagu wadaagayo shabakaddaada.
Soo deji beta-ka ugu dambeeya ee Ubuntu 16.10 Yakkety Yak hadda
Ubuntu waxay ugu dambayntii sii deysay Beta 2 oo ah nooca cusub ee Ubuntu 16.10 Yakkety Yak, oo ah nidaamka hawlgalka ee rasmiga noqon doona Oktoobar 13.
Ma waxaad ku safreysaa diyaarad? Waa kuwan dhammaan lambarka sirta ah ee Wi-Fi ee garoomada diyaaradaha adduunka
Inbadan oo naga mid ah waxay u muuqdaan inay si joogto ah u safraan, ha ahaato shaqo, raaxo, iwm. Markaynu gaadho ...
IBM, Microsoft, Amazon, Google iyo Facebook ayaa kala saxiixday heshiis lagu kormeerayo horumarinta caqliga macmalka ah
Shirkado caalami ah oo waaweyn sida Amazon, Google, Facebook, IBM ama Microsoft ayaa gaadha heshiis lagu xakameynayo horumarinta caqliga macmalka ah.
Moscow waxay joojin doontaa adeegsiga barnaamijka Microsoft
Dowlada Ruushka ayaa qaaday talaabadii ugu horeysay ee ay ku bilaabayso inay ku joojiso iyadoo kuxiran barnaamijka softiweerka ee Microsoft waxayna wax ka badali doontaa dalabka boostada ee loo yaqaan 'Outlook mail' mid qaran
Shirkadaha - jajabiyayaal. Maxay yihiin, maxay u yihiin iyo feylasha kombuyuutarrada lagu doorto
Ma ogtahay waxa kombaresaradayaasha faylalka iyo kuwa wax xukuma? Waxaan kuu sharaxeynaa waxa ay yihiin iyo kuwa ugu fiican ee lagu isticmaalo kombuyuutarkaaga.
Miyaad wax si khalad ah u tirtirtay? Soo Celinta Xogta iPhone waa xalka
Soo Celinta Xogta iPhone, oo ah aalad awood badan oo noo oggolaan doonta inaan ka soo kabano wixii la tirtiray ee WhatsApp, qoraalada, xiriirada iyo xitaa sawirada laga helo iPhone-keena.
Diyaarado waraaqo ah oo ka socda taleefankaaga casriga ah si aad uga hesho meel kasta oo meeraha ah
Paper Planes waa barnaamij cusub oo kuu ogolaanaya inaad ku duuli karto diyaarad warqad ah si ay ugaarsadaan qofkasta oo dunida kale ku nool.
MIT waxay u abuureysaa luuqad barnaamij cusub oo loogu talagalay Xogta Weyn
Magaca caanaha ragga ka socda MIT waxay ku baabtiiseen luuqadooda barnaamij cusub oo si gaar ah loogu sameeyay howlaha Big Data.
Microsoft waxay ku dhawaaqday LinkedIn Learning, oo ah websaydh koorso internetka ah
Shirkadda Microsoft ayaa hadda ku dhawaaqday inay soo bandhigtay waxa ay ugu magac dareen LinkedIn Learning, oo ah degel loogu talagalay koorsooyinka internetka.
Soo dejiso Allo hadda, abka cusub ee farriinta Google ee leh kaalmooyinka muuqaalka ah iyo waxyaabo kale oo badan
Hadda waad soo dejisan kartaa barnaamijka cusub ee fariimaha Google: Allo. Tani waxay udub dhexaad u tahay Kaaliyaha Google iyo taxane kale oo wanaag ah
Apple wuxuu sii daayaa nooca ugu dambeeya ee macOS Sierra
Nooca ugu dambeeya ee nidaamka qalliinka ee kombiyuutarada Mac ayaa hadda laga heli karaa si bilaash ah oo laga soo dejiyo Mac App Store
Opera waxay si bilaash ah ugu fidisaa adeegyadeeda VPN nooca desktop-ka
Opera ayaa hadda ku dhawaaqday nooca cusub ee biraawsarkeeda iyadoo ikhtiyaar u ah in la isticmaalo VPN gebi ahaanba bilaash.
Google Allo ayaa la heli karaa toddobaadkan
Google Allo waa barnaamijka fariimaha degdega ah ee Google ay soo bandhigi doonto todobaadkan sida uu sheegayo Evan Blass wuxuuna raaci doonaa Google Duo ...
Soo dejiso beta-beta-ka oo fiidiyowyo ku duub asalka Android
Chrome waxaa lagu cusbooneysiiyay kanaalkiisa beta ilaa nooca 54 oo u oggolaanaya in fiidiyowyadu ku dhex socdaan asalka markii ay u wareegayaan barnaamij kale.
Microsoft Edge wuxuu sii wadaa inuu ka adkaado tartanka dhanka isticmaalka batteriga
Mar labaad Microsoft waxay daabacday fiidiyow cusub oo aan ku aragno sida Edge u sii ahaado midka bixiya waxqabadka batteriga ugu fiican
[Soo Degso APK] Nova Launcher waxaa lagu cusbooneysiiyay ikhtiyaarrada is-dhexgalka ee loo yaqaan 'Pixel Launcher'
Nova Launcher ayaa lagu cusbooneysiiyay astaamaha gaarka ah ee kujira muuqaalka Pixel Launcher ee beta 5.0 oo aad kala soo bixi karto APK.
Instagram waxay kudarineysaa keydinta sheekooyinkaaga
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee la heli karo ee 'Instagram', muuqaal autosave ah ayaa hadda loo hirgeliyay dhammaan sheekooyinka aan abuurnay.
Google wuxuu ku xaliyaa dhibaatooyinka cusub ee amniga barnaamijkeeda
Waad ku mahadsantahay cusbooneysiintii ugu dambeysay ee ay soo saartay Google, ficil ahaan dhammaan dhibaatooyinka amniga ee lagu ogaado Android waa la xaliyay.
Muusikada qulqulka $ 5 mahadsanid Amazon iyo Pandora
Labada shirkadood ee Amazon iyo Pandora waxay rajaynayaan inay diyaariyaan adeegyadooda muusigga oo diyaar ah dhammaadka sanadka iyaga oo ka qayb qaadanaya $ 5 bishii.
[APK] Soo dejiso oo iskuday barnaamijka cusub ee Pixel Launcher hadda, ama muxuu ahaa Nexus Launcher
Pixel Launcher waa barnaamijka bilawga ah ee Google ee aan ka ogaanay Nexus Launcher taasina waxay fursad u siineysaa magaca Pixel ee aan arki doono Oktoobar 4.
WaveNet, oo ah codka cusub ee synthetic ee uu abuuray DeepMind
Si aan sifiican u fahmo waxa nidaamka codka synthetic yahay iyo sida uu u shaqeeyo, waxaan rabaa inaan tixraaco ...
Cusbooneysiinta cusub ee Pokémon Go waxay soo bandhigeysaa khilaafka Iska ilaali!
Cusbooneysiinta Pokémon Go cusbooneysiinta 0.37 ayaa hadda la heli karaa, cusboonaysiin muran badan dhalisay oo ciyaarta ka dhigaysa mid aan ku shaqeyn aaladaha xididaysan ...
Kalluun Super Mario ah ayaa ku soo dhuunta App Store
Isku dhejinta Nintendo ee caanka ah ee Super Mario ayaa hadda laga helay App Store.
Ku xakamee taleefankaaga casriga ah 'Android' tilmaamaha jiirka ee kombiyuutarkaaga oo leh 'DeskDock'
DeskDock waa barnaamij kuu oggolaanaya inaad ku xirto taleefankaaga casriga ah kombuyutarkaaga si aad uga maamusho jiirka iyo kumbuyuutarka si aad ugu maareyso faylka iyo waxyaabo kale.
Ku habee barta hagista ee Android-kaaga Navbar Apps adiga oo aan xidid noqon
Barnaamijyada Navbar waxaad ku habeyn kartaa midabka asalka ah ee bar tilmaameedka taleefankaaga Android adigoon u baahnayn inaad xidid.
Google wuxuu sii wadaa inuu sharad ku sameeyo Android Pay
Google wuxuu sii wadaa inuu sharad ku sameeyo Android Pay, maahan oo kaliya inuu iskaashi la yeesho sida Uber ee laakiin sidoo kale wuxuu sii wadaa inuu ku daro codsiyada sida Google Chrome
BlackBerry Hub + oo hadda loo heli karo Android 5.0 iyo qalab ka sareeya
Bil ka hor, BlackBerry waxay billowday qayb ka mid ah barnaamijyada Android, in kastoo ay rakibayaan oo keliya dadka isticmaala Android 6.0 Marshmallow.
Processor-rada cusub ee Intel iyo AMD waxay KELIYA la jaan qaadayaan Windows 10
Processor-yada cusub ee ka socda Intel iyo AMD waxay kaliya la jaan qaadayaan Windows 10 maadaama Microsoft aysan taageerin nidaamyadii hore ee lagu shaqeyn jiray ...
Firefox nooca 48 wuxuu hagaajiyaa xawaarahaaga inta udhaxeysa 400% iyo 700%
Bishii la soo dhaafay kuwa ka masuulka ah horumarinta Mozilla Firefox waxay soo bandhigeen cusbooneysiin cusub, gaar ahaan nooca 48 ee biraawsarka, ...
90% qalabka macruufka 9 ka mid ah ee horay loo sii rakibay
Dhowr maalmood ka hor intaan la gaadhin nooca ugu dambeeya ee iOS 10, Apple waxay si rasmi ah u shaacisay in 90% aaladaha la jaan qaadaya macruufka 9 ay horay u rakibeen.
OpenOffice waa la waayi karaa muddada gaaban
Ilaa maanta, haddii aad raadineysay meel kale oo furan oo xafiiska Microsoft ah, waxaad badanaa aadi jirtay OpenOffce. Nasiib darrose tan ...
Ku samee raadinta websaydhka adiga oo aan furayn barnaamijkaaga 'Android' ee 'Screen Lock Screen' ee nooca cusub
Iyada oo Shaashadda Qufulka Xiga, tan iyo noocii ugu dambeeyay, waxaad awoodi doontaa inaad ku sameyso raadinta webka shaashadda qufulka taleefankaaga Android.
Hawlaha ayaa ah barnaamijka 'Astrid clone app' oo loogu talagalay liisaska wax-qabad tayo sare leh
Haddii aad raadineysid lammaane Astrid ah, waxaad leedahay Hawlo sida mid ka mid ah barnaamijyada liistada ugu wanaagsan ee wax laga qaban karo ee Google Play Store. Bilaash tayadaada ugu fiican
Google Wallet waa la cusbooneysiiyay si ay u awoodaan inay dhigaal dhigtaan bangiyada
Wallet Google wali wuu nool yahay. Google ayaa bilaabay cusbooneysiin ku saabsan adeegga kuu ogolaanaya inaad lacag ugu dirto akoonnada bangiga adiga oo aan dhex-dhexaadin ama kaarar ...
Ka hel habka habeenka barnaamijka 'Android 7.0 Nougat' barnaamijkan
Nooca ugu dambeeya ee Android 7.0 Nougat majirto habayn habeen ugu dambayntii, laakiin barnaamijkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dib uhesho si aad udhaqaajiso.
MIT waxay ogaatay sida loogu dhufto 10 xawaaraha WiFi
MIT ayaa hadda ku dhawaaqday in mid ka mid ah kooxahoodu ay soo saareen algorithm cusub oo awood u leh inuu ku dhufto xawaaraha WiFi kasta 10.
MIUI 8 ayaa hadda loo heli karaa rakibidda qalabka Xiaomi
Xiaomi ayaa hadda ku dhawaaqday, ka dib markii laga bilaabay dalal dhowr ah, nooca MIUI 8 ayaa ugu dambeyn la gaari doona dhammaan isticmaaleyaasha adduunka.
Android Nougat 7.0 ayaa u imanaya Nexus bilaabmaya maanta
Haa, kani waa warka aan maanta ku dhammeyneyno taasna waa nooca cusub ee ...
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Windows 10 waxay ka tagaysaa kumanaan isticmaale la'aan webcam
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Sannad-guurada Windows 10 waxay sababtay kumanaan kamaradood oo webka ah inay hoos ugu dhacaan Windows 10 wax la hagaajin doono ...
Fuchsia OS maxaa ka cusub Google?
Fuchsia OS waa magaca ka soo muuqday ee la xiriira Google iyo Internetka Waxyaabaha, laakiin dhab ahaantii ma waxay noqon doontaa beddelka Android iyo Google?
Spotify Gamers, waa qayb cusub oo loogu talagalay adduunka ciyaaraha fiidiyowga
'' Spotify 'waxay si fiican u fahmeen taas, si ay u ahaadaan halbeeg qaybta adag ee suuqa halka ay ka shaqeeyaan ay u baahan yihiin ...
Kuwani waa Nexus oo heli doona Android 7.0 Nougat
Maanta haddii ay jiraan aalad aan dhihi karno waa la cusbooneysiin doonaa haddii ama haddii ay soo baxdo ...
Vivaldi 1.3 wuxuu bilaabayaa xulashooyin habayn cusub
Vivaldi, oo ah biraawsar shabakadeed oo dad badani u arkeen inay bedel u yihiin Google Chrome, wuxuu soo bandhigayaa ikhtiyaarro habayn cusub oo ku saabsan nooca 1.3
Waxaa la ogaaday cillad xagga amniga ah oo ku jirta LastPass oo oggolaan lahayd in la xado dhammaan furayaasha sirta ah
Koox khubaro ah ayaa hadda soo sheegay cillad suurtagal ah oo xagga amniga ah oo ka jirta LastPass taas oo sababi doonta in qof walba xado dhammaan lambarka sirta ah ee isticmaalaha.
Muuqaalka Wadada ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 2.0.0 ee loogu talagalay Android
Nooca cusub ee Google Street View ayaa hadda loo heli karaa in laga soo dejiyo Google Play Store. Tan…
Ubuntu 16.04.1 hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo
Gelitaanka halkaas oo aan ka hadli doonno helitaanka iyo wararka Ubuntu 16.04.1 soo bandhigeyso, nooca ugu dambeeya ee nidaamka hawlgalka caanka ku ah.
Ha iloobin, waxaad haysataa oo keliya illaa Jimcaha si aad ugu cusboonaysiiso Windows 10 bilaash
Maanta waxaan dooneynaa inaan ku xusuusinno inay maalmo kooban ka harsan yihiin in la rakibo Windows 10 bilaash ah, waana wax xaqiiqdi ah inaad ka faa'iideysato.
IPhone-ka gaboobay ayaa lagu jabsan karaa barnaamijka loo yaqaan 'iMessage'
Injineer Cisco ah ayaa ku dhawaaqaya in macruufka, iyada oo loo marayo iMessage, si fudud loo jabsan karo sababo la xiriira dhibaatooyinka sawirada .TIFF
Weerarkii ugu dambeeyay ee DDoS wuxuu jabiyaa diiwaanka wareejinta xogta
Weerarkii ugu dambeeyay ee DDoS oo ay bilaabeen koox burcad ah ayaa cinwaano ka dhigay in ay awood uleeyihiin in ay jabiyaan rikoorkii hore ee wareejinta xogta.
Lacag kaydi adoo adeegsanaya nidaamyada sirdoonka macmalka ah
Thanks to tababbarkii hore ee nidaamyadeeda sirdoonka macmalka ah, Google waxay muujisay sida ay muhiim ugu noqon karaan badbaadinta tamarta.
Windows 10 ma gaari doono 1.000 bilyan oo isticmaale waqtigooda
Microsoft waxay dejisay hadafka ah inay gaarto 1.000 bilyan oo isticmaale ka hor sanadka 2018, laakiin hadafkaas waa ka fog yahay in la gaaro laga bilaabo maanta.
Haddii laptop-kaaga hore uusan taageerin Windows 10, Microsoft ayaa mid ku siineysa
Microsoft waxay soo bandhigtay hal dalab oo dheeri ah si aan uheysano Windows 10, waa dalab badalaya laptop-kii hore mid cusub hadii Windows 10 uusan shaqeyn ...
Riffle, oo ah borotokool amni oo ay soo saartay MIT oo ka ammaan badan TOR
Riffle waa borotokool amni oo ay abuurtay MIT iyo in, inta lagu jiro tijaabooyinka, la caddeeyay inay ka amni badan tahay TOR.
Megaupload mar kale ayuu shaqeyn doonaa Janaayo 2017
Sida imika la shaaciyey, shan sano ka dib khadka, adeegga Megaupload wuxuu mar labaad shaqeyn doonaa laga bilaabo Janaayo 20, 2017.
Cilad ku jirta barnaamijka 'Spotify app' waxay sababi kartaa malaayiin khasaare xagga adeegga ah
Hackers wuxuu ogaadaa cillad ku jirta barnaamijka 'Spotify app' kaas oo kuu ogolaanaya inaad heysato dhammaan faa'iidooyinka habka caymiska adiga oo aan lacag ka bixin adeegyadan ...
Google wuxuu bilaabaa u diyaarinta Chrome imaatinka kumbuyuutarka xisaabta
Khubarada Google ayaa durbaba ka shaqeynaya diyaarinta Chrome heerka amniga mustaqbalka imaatinka kumbuyuutaro kumbuyuutar ah.
5 sababood oo kor loogu qaadayo Windows 10 adigoon aad uga fikirin
Windows 10 wuxuu kusii kordhayaa tirada isticmaaleyaasha hadii aadan wali go aankaaga gaarin maanta waxaan kuu soo bandhigeynaa 5 sababood oo aad ugu cusbooneysiin karto nooca cusub ee software-ka
Dhamaan MRIs sanadihii la soo dhaafay way khaldami karaan
Dhibaato ayaa lagu ogaadey MRI taas oo saameyn doonta dhammaan daraasadaha sayniska iyo tijaabooyinka bukaanada la sameeyay tan iyo 1992.
7 codsi oo si bilaash ah looga waco taleefankaaga casriga ah
Ma ubaahantahay codsi si aad u sameyso wicitaano cod oo bilaash ah Maanta waxaan ku tusineynaa 7 kaamil ah faa iidooyin iyo xulashooyin si wicitaanku uusan wax lacag ah kaaga bixin
Top 5 beddelka Evernote maareeyayaasha hawsha
Soo hel 5-ta beddel ee ugu wanaagsan Evernote si aad u doorato maamulaha hawsha ee sida ugu habboon ugu habboon baahiyahaaga isla markaana aad u abaabuli karto howlahaaga.
Soo ogow sida aad ugu samayn karto USB-ga la kici karo nidaam kasta oo ka hawlgala iyo ISO.
Kuwani waa 10-ka sheeko ee ugu muhiimsan ee IOS 10
Shalay Apple waxay si rasmi ah u soo bandhigtay macruufka cusub ee 10 waxaana maqaalkan aan ku tusinaynaa 10-keeda cusub ee cusub ee aan isticmaali karno wixii hada ka dambeeya.
Sideen ku hormarin karaa amniga shabakadeyda WiFi?
Waxaan ku siineynaa talooyin fudud oo ku saabsan sida loo hagaajiyo amnigaaga iyadoo loo marayo isku xirnaanta WiFi iyo isku xirnaanta gurigaaga laftiisa.
7 codsi oo lagu helo radar kasta oo laga fogaado ganaax
Haddii aadan rabin wax radar ah inay ku ganaaxaan, waxay noqon kartaa fikrad aad u fiican inaad soo dejiso oo aad ku rakibto mid ka mid ah barnaamijyadan aaladdaada moobaylka ah.
Chrome ayaa joojin doonta adeegsiga furaha tirtirka si ay ugu noqoto boggii hore
Google waxay wax ka beddeli doontaa hawlgalka furaha dhabarka ee Chrome si halkii aad ugu noqon lahayd boggii hore, ay u tirtirto ereyada aan dooneyno.
Waxaan kuu sheegeynaa sida loo abuuro koontada aragtida bilaashka ah si aad ugu raaxaysato cinwaan emayl cusub oo Microsoft ah oo Isbaanish ah.
Ubuntu 16.04 LTS ayaa la sii daayay. Waxaan kuu sheegeynaa warkooda
Nooca ugu dambeeyay ee nidaamka qalliinka ee Canonical ayaa hadda loo heli karaa soo dejin iyo rakibid: Ubuntu 16.04 LTS.
Ma rabtaa inaad wax ku keydiso qiimaha taleefankaaga gacanta? Ku rakib barnaamijka Roams ee loogu talagalay macruufka ama Android oo ku raaxee taleefanka dhib-la'aanta ah.
fooView waxay bixisaa hab cusub oo xeeladaysan oo lagula falgalo taleefankaaga Android
Haddii aad raadineyso qaab cusub oo aad kula macaamisho taleefankaaga Android, fooView waa barnaamijka aad raadineysay adoo siinaya qalab gaar ah.
Waa maxay Server khaas ah oo Virtual ah?
Waa maxay VPS ah iyo sida ay u kala duwan oo ka gaar ah ama la wadaago martigelin yahay? Soo ogow faa iidooyinka adoo adeegsanaya server khaas ah oo khaas ah oo loogu talagalay mashruucaaga internetka.
7 barnaamij oo lagu barto Ingiriisiga oo aan dhib lahayn
Ma rabtaa inaad ku barato Ingiriisiga qaab fudud? Waxaad ku sameyn kartaa mid ka mid ah codsiyada soo socda.
5 codsiyada Google ee laga yaabo inaadan aqoon oo faa'iido badan yeelan kara
Miyaad u maleyneysaa inaad taqaanid dhammaan codsiyada Google? Waan hubnaa inaadan aqoon oo qodobkaan waxaan ku tusinaynaa qaar aan lagaranayn.
Top 10 daalacashada shabakadaha desktop
Daalacashada shabakadaha waxaa jira kuwo badan. Midkee ayaan dooranaa? Halkan waxaan ku tusi karnaa isku-ururinta shabakadaha kumbuyuutarka ee ugu fiican.
9 sababood oo Telegram ay uga fiican tahay WhatsApp
Telegram ma ka fiican yahay WhatsApp shaki la’aan waxaan aaminsanahay inay tahay waana sababaha aan u aaminsanahay.
Tifatirayaasha sawirada tooska ah ee bilaashka ah
Ku saxar sawiradaada khadka tooska ah adigoon wax barnaamij ah kumbiyuutarkaaga ku darin xulashada tafatirayaasha sawir ee aad isticmaali karto markasta oo aad rabto.
Halkee iyo sida loo daawan karo Champions League
Ma dooneysaa inaad aragto kulanka Real Madrid vs PSG? Iyo Barcelona vs BATE?. Baro sida loogu daawado dhamaan kulamada Champions League tayada ugu fiican.
7 ciyaaro aad u qabatin badan oo loogu talagalay taleefankaaga casriga ah
Haddii aad jeceshahay inaad ku ciyaarto ciyaaro taleefankaaga casriga ah, liiskan waxaannu soo jeedinaynaa 7 ciyaarood oo balwad leh oo aad ku raaxaysato maalin kasta.
5 fure oo ku saabsan Netflix si aad ugu raaxeysan karto si buuxda
Netflix hadda waxaa laga heli karaa Isbaanishka iyada oo qodobkan waxaan kuu soo bandhigeynaa 5 fure si aad ugu raaxeysato sida ugu buuxda oo aad u fahanto waxyaabo badan.
Abuur emailka Hotmail
Cashar fudud oo aad ku arki karto sida loo abuuro emaylka Hotmail talaabo talaabo ah. Waa daqiiqado kooban oo waxaad kuheli kartaa akoonkaaga hotmail si deg deg ah.
Sida loo xiro tabs-yada Safari si dhakhso leh
Waxaan ku tusineynaa xeelad yar oo aad si deg deg ah ugu xirto tabs-ka biraawsarka Safari ee OS X
Sida sawirro loogu soo raro barta 'Instagram' ee loo yaqaan 'Chrome'
Thanks to kordhinta Chrome, waxaan u adeegsan karnaa biraawsarkan si aan sawiro ugu soo dhigno shabakada bulshada
Sidee dib loogu soo celiyaa widget-yada desktop-ka Windows 10
Adoo adeegsanaya labo barnaamij waxaan kuheli karnaa widget-yada kumbuyuutarka ee Windows 10
Sida ugu dhakhsaha badan ee loo demiyo Windows 10 PC-ga
Windows 10 ayaa si aad ah u adkaatay in la xiro kombiyuutarka iyada oo laga door bidaayo in la hakiyo. Waxaan ku baraynaa sida dhaqsaha badan loo xiro kombuyuutarkaaga.
Sida loogu beddelo akoon maxalli ah Windows 10
Waxaan ku tusineynaa sida dib loogu helo akoon maxalli ah Windows 10 adoo tirtiraya koontada Microsoft, oo loo adeegsan karo is waafajin.
3 antivirus bilaash ah oo aadan ka waayi karin Windows 10-kaaga
Windows 10 horeyba wuu inala socdaa markaa waxaad u baahan kartaa antivirus bilaash ah si aad u difaacdo kumbuyuutarkaaga.
6 talo si Google Chrome loo dardar galiyo
Google Chrome uma shaqeeyo sida ugu dhakhsaha badan ama sida aad jeclaan lahayd? Si taxaddar leh u aqri tilmaamahan waxaadna si dhakhso leh caadi ugu soo noqon doontaa.
Sida loo joojiyo Windows 10 inuu ku basaaso
Windows 10 wuxuu ku daraa tiro wanaagsan oo adeegyo ah oo mas'uul ka ah basaasidda adeegsadaha. Haddii aad rabto inaad ilaaliso arimahaaga gaarka ah isticmaal qalabkan.
Codsiyada 7 si aad uga faa'iidaysato barta Instagram
Instagram waa mid ka mid ah codsiyada ugu caansan waana sababta aan maanta u soo bandhigno 7 codsi si aan uga sii faa iideysano.
Sida loo beddelo sawirka boot-ka ee Windows 10
Windows 10 waxay noo ogolaaneysaa inaan bedelno sawirka bilowga ah laakiin loo maro codsiyada dhinac saddexaad.
Tirtirida codsiyada Windows 10 waa geedi socod aad ula mid ah wixii aan ku sameyn karno Windows 8 noocyadiisa kala duwan
Sida loo dhajiyo waraaqo kala duwan kormeerayaasha kala duwan ee Windows 10
Waxaan ku baraynaa sida loo dhigo ama loo dejiyo sawir-gacmeedyo kala duwan oo ku jira Windows 10 qaabeynta kormeer badan.
Sida looga saaro "live tiles" una yaree cabirka menu-ka bilowga ah ee Windows 10
Waxaan ku baraynaa inaad ka saarto foornada nool isla markaana aad yareyso cabbirka menu-ka bilowga ah ee Windows 10 si aad ugu haboonaato waxa ay tahay khaanad fudud.
Sida loo sahlo qalabka Flash-ka ee ku jira Google Chrome
Xaaladaha soo ifbaxaya, waxaad u baahan kartaa inaad qaadato xeelad yar si aad ugu suurta geliso Adobe flash-ka Google Chrome.
Sida loo soo dejisto Windows 10 oo ay ku jiraan lambar taxan ah
Iyada oo loo marayo dhowr talaabo oo isdaba-joog ah waxaad kala soo bixi kartaa Windows 10 lambarka taxanaha ah oo ay ku jiraan gabi ahaanba bilaash.
5 Codsiyada aad ku xakamaynaysid kharashyadaada ama dakhligaaga
Ma rabtaa inaad ku xakameyso kharashyadaada iyo dakhligaaga qaab fudud Mid ka mid ah codsiyadaan ayaa noqon kara xalka ugu fiican ee aad raadineyso.
Meelaha Togagga ugu Fiican 2015
Waxaan ku tusineynaa tobanka shabakadood ee ugu fiican ee Torrents oo aad ku soo dejisan karto filimo ku qoran Ingiriis ama Isbaanish, taxane, muusig, cinwaanno hoose iyo kuwo kale.
Top 50 Mawduucyada Windows 8.1
Waxaan ku tusineynaa 50ka mowduuc ee ugufiican Windows 8.1 inta aan sugeyno imaatinka Windows 10 iyo fursadaha qaabeynta.
Sida loo cabiro masaafada udhaxeysa labada dhibic adoo adeegsanaya Khariidadaha Google
Qalab cusub ayaa la geliyay Khariidadaha Google, kaas oo naga caawin doona inaan ogaano masaafada u dhaxeysa laba dhibic oo fog.
Sawirada Apple: Waa fikrad aad u wanaagsan oo lagu hagaajinayo qabashadayada
Sawirada Apple waa aalad cusub oo bilaash ah oo aan u isticmaali karno inaan ku keydinno sawiradeena isla markaana aan si fudud ugu shaqeyno.
5 Barnaamij oo sigaar joojinta ah
Joojinta sigaarka ma aha howl aan macquul aheyn waxaadna ku suurta galin kartaa adiga oo isticmaalaya mid ka mid ah codsiyadaan aan soo jeedineyno maanta.
Desktop-ka Virtual-ka ee Windows 10: Ma ogtahay inay jiraan hababka loo adeegsado kumbuyuutarrada loo adeegsado iyaga?
Windows 10 waxay la timaadaa astaamaha lagu maareeyo Qorayaasha Virtual iyo iyada oo la adeegsanayo, toobiyeyaasha kumbuyuutarka si loo maareeyo iyaga.
AHD Subtitles Maker: Samee subtitles aan khibrad badan u lahayn filim
AHD Subtitles Kan sameeyey waa aalad yar oo bilaash ah oo naga caawin doonta inaanu abuurno subtitles sida aan u jecel nahay, filim kasta.
Raffle liisanka Nero 2015 Platinum
Waxaan tijaabinay Nero 2015, barnaamijka ugufiican ee lagu keydiyo laguna maareeyo dhamaan sawiradeena, fiidiyowyada iyo muusikada.
BluffTitler: Samee Hordhac Fiidyowyadaada Si Fudud
BluffTitler waa codsi Windows ah oo kaa caawin doona inaad u abuurto fiidiyowyo hordhac u ah mashruucaaga ama kanaalka YouTube.
Fikradaha Magaca Isticmaalaha: Ka hel naaneys sax ah Shabakadahayaga Bulshada
"Fikradaha Magaca Isticmaalaha" waa aalad onlayn ah oo naga caawin doonta inaan helno naanaysta saxda ah ee loogu adeegsado shabakadaha bulshada.
Spotify, Apple Music, Tidal iyo Google Play Music ayaa waji ka waji ka wajihi doona
Maqaalka ayaa la sameeyay waxaan isbarbar dhignay afar ka mid ah adeegyada muusikada qulqulka weyn ee suuqa sida Spotify, Apple Music, Tidal iyo Google Play Music.
5 Qalabka lagu duubo waxqabadka shaashadda kumbuyuutarkaaga
Uruurinta aaladaha kaa caawin doona inaad duubto waxqabadka shaashadda ee Windows-ka oo aad si fudud u sameyso boodhadh.
Sidee looga soo degsadaa fiidiyowyada TED.com Windows-ka?
TED.com waa bog laga helo fiidiyowyo xiiso leh oo aan dhegeysan karno wakhti kasta haddii aan ku soo dejino wadno-hageena adag.
Khiyaano si aad u aragto faylasha iyo faylalka ku jira darawalka adag ee biraawsarka internetka
Xeelad yar ayaynu ku dhex mari karnaa galka ku jira diskiga adoo adeegsanaya kaliya biraawsarka internetka.
Sida loo ogaado khaladaadka ku jira Kaarka Video-ga ah ama aan lahayn Windows
Qalab fudud ayaa awood u leh inuu noo sheego haddii uu si buuxda u shaqeynayo ama haddii uu leeyahay nooc ka mid ah guuldarada Windows gudaheeda.
Trick si aad ugu soo dejiso Software Soo-kabashada Xogta ah 'Sony Stick Duo'
Xeelad yar oo kaa caawin doonta inaad kala soo baxdo barnaamijka soo kabashada xogta ee xusuusta Sony Stick Duo
Qalabka Gargaarka Degdegga ah ee Emsisoft: Raadi oo ka saar khaladaadka USB Flash Drive
Qalabka Gargaarka Degdegga ah ee Emsisoft waa qalab bilaash ah oo aad ka ordi karto USB flash drive si aad uga takhalusto nooc kasta oo khayaano ah oo ku jira Windows.
PortableApps: Sirta ah barnaamijyadaada la qaadan karo adiga oo aan ku rakibin Windows
PortableApps waa nidaam macmiil ahaan ugu shaqeeya codsiyo aad u tiro badan oo lagu fuliyo Windows iyada oo aan la rakibin midkoodna.
5 Qalabka kaa caawin doona inaad ku aragto xaaladda batteriga laptop-ka
Qalab yar ayaan ku ogaan karnaa gobolka uu ku jiro batteriga laptop-ka.
5 Qalab oo Lagu Nashaadaado Nuurka Shaashada Kombiyuutarka Windows
Aalado yar ayaynu ku xakamayn karnaa dhalaalka shaashadda kumbuyuutarka Windows illaa heer la aqbali karo si aysan u daalin indhaheenna.
6 beddelka khadka tooska ah si loo abuuro jaantusyo tirakoob bilaash ah
10 aaladaha internetka ee naga caawin doona inaan ku badalno Excel ilo kale oo bilaash ah oo loogu talagalay jaantuskeena tirakoobka.
Sida loo "Raadi oo loogu beddelo" ereyada ku jira dukumeentiyo fara badan hal guji
Iyadoo la adeegsanayo aalado yar iyo xeelado yar oo la adeegsado, waxaan ku raadin karnaa eray ku jira dukumiintiyo kala duwan oo waxaan ku badali karnaa mid kale.
Sida loo xannibo gelitaanka degelkeenna waddamada qaarkood
Iyadoo la adeegsanayo tabo yar iyo qalab ayaan ku joojin karnaa marin u helka waxyaabaha ku jira degelkan dalal gaar ah oo ku yaal meeraha.
U isticmaal kiiboodhka LED-ka tilmaame waxqabadka shabakadda maxalliga ah
2 qalab oo naga caawin doona inaan aragno waxqabadka shabakadda maxalliga ah ee ka muuqata LED-ka kumbuyuutarka.
Sida looga takhaluso jiritaanka "antivirus been abuur ah" oo lagu dhex galiyay Windows
Ka tirtir oo ka saar antivirus-ka been abuurka ah ee Windows-ka ah si aad uga hortagto in kombiyuutarkeena shaqsiyadeed la xayiro inta uu jiro.
3 Qalab lagu keydiyo waxa aan ku qoreyno xusuusta kumbuyuutarka
3 aaladda internetka ayaa naga caawin doonta inaan si otomaatig ah ugu keydinno xusuusta kumbuyuutarka, waxa aan ku qoreyno tifaftiraha webka.
Snapchat laga bilaabo 0 illaa 100
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa wax walboo aad u baahan tahay inaad ogaato oo aad barato sida loo isticmaalo barnaamijka caanka ah ee Snapchat.
Tilmaamaha Buuxda: Ku hawlgal wax ka badan 4 GB oo RAM ah oo ku jira Windows 32-bit
Xeelad yar ayaynu uga gudbi karnaa xadka 4 GB ee kombiyuutarada Windows 32-ka ah.
5 beddel si loo tirtiro faylasha adag ee lagu tirtiro Windows-ka
Uruurinta aaladaha kaa caawin doona inaad tirtirto feylasha xiran oo adag in la tirtiro Windows-ka.
SignMyImage: beddelaad si aad ugu dhigto saxeex digital ah sawiradaada
SignMyImage waa codsi naga caawin doona inaan ku dhigno saxeex dijitaal ah sawirradeenna ama sawirradayada gudaha Windows.
Sidee looga soo kabanayaa Nambarka Serial ee Windows markii uusan bilaaban?
Adoo adeegsanaya codsi iyo tabaha qaarkood waxaan ku soo ceshan karnaa lambarka taxanaha ee Windows xitaa marka ay umuuqato inay dhimatay oo aan bilaabi karin
5 beddel ah oo lagu kaydiyo USB-gaaga pendrive ee Windows
Si loo Encrypt USB pendrive ee Windows, noocyo ka mid ah OS iyo xoogaa tabaha qalab bilaash ah ayaa loo baahan yahay.
Sidee looga soo saaraa looxyada animation Gif ah?
Dhowr tabaha iyo codsiyada loogu talagalay Windows ayaa naga caawin doona inaan ka soo saarno looxyada animation Gif ah.
Sida loo galo MS Office Serial No. si otomaatig ah markaan u rakibno
Xeelado yar yar ayaan ka dhigi karnaa lambarka taxanaha ah ee Xafiiska si otomaatig ah loo dhex gelinayo markii la rakibayo suunka.
5 Qalab si aad u Aragto Daacadnimada CD-yadaada ama DVD-yadaaga Windows-ka
Isticmaalka shan qalab oo bilaash ah oo loogu talagalay Windows waxaan ku ogaan karnaa sharafta CD-ROM ama DVD disc.
Khiyaamada: Sida loo helo boot nadiif ah oo dhaqso badan oo Windows ah
Dhawr xeeladood ayaynu ku samayn karnaa Windows-ka si ka dhakhso badan sidii hore.
3 Qalabka internetka si loogu beddelo maqaal ka socda websaydhka dukumiinti PDF ah
Adeegso aalad qadka ah si aad ugu badasho maqaal ka socda websaydhka dukumiinti PDF ah si aad si fudud ugu soo dejiso.
Kuwani waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee Windows ee xallintooda suurtogalka ah
Qodobka aan ku tusno dhibaatooyinka waaweyn ee aan ka heli karno Windows-ka, iyo waliba xallintooda suurtogalka ah.
5 Qalab lagu ogaanayo xawaaraha Akhriska-Qor USB pendrive
Qalab yar oo naga caawin doona inaan ogaanno xawaaraha akhriska ama qorista ee pendrive USB-ka.
Soo hel maktabadaha .dll ee loo baahdo in lagu socodsiiyo codsi Windows-ka ah
Anagoo adeegsanayna waxoogaa tabaha iyo aaladaha ah waxaan ka raadin karnaa internetka maktabadaha .dll ee looga baahan yahay codsi Windows ah.
Sida loo Dhoofiyo Calaamadaha iyo waxyaabaha ugu xiisaha badan ee u dhexeeya daalacashada shabakadaha badan
Iyadoo la adeegsanayo tabo yar iyo qalab, waxaan si fudud oo dhaqso leh ugu wareejin karnaa calaamadaha bog-shabakadeed mid kale una wareejin karnaa mid kale.
5 Qalab oo lagu Garto Dhawaaqyada ama Heesaha aan la aqoon
Khiyaamo iyo qalab yar oo bilaash ah ayaan ku aqoonsan karnaa heesaha aan la garanayn halka aan kaliya ugu muusayn karno laxankaas.
Sida loo joojiyo muuqaalka Habka Nabdoon ee Windows
Khiyaamo yar ayaynu ku shaqeyn karnaa howsha Habka Badqabka ee Windows-ka ee soo muuqda marka la riixayo furaha F8 bilowga.
Soosaarida erayga sirta ah ee feylasha isku-duuban ee ku dhex jira Windows
Codsiyo yar ayaynu kala soo bixi karnaa waxa ku jira faylasha la isku cadaadiyey ee ku jira Windows, kuwaas oo leh furaha furaha.
Soo hel kombiyuutarrada ku xiran Shabakadda Maxalliga ah iyo faylalka ay wadaagaan
Qalab yar ayaan ku baran doonaa inaan aragno kombiyuutarada ku xiran shabakad maxalli ah iyo fayllada ay dadka kale la wadaagayaan.
Sida loo buuxiyo feylasha caamka ah USB Pendrive
Codsiyo yar oo naga caawin doona inaan ku buuxino faylal been ah ama khiyaali ah oo ku saabsan USB-ka si loo ilaaliyo qoritaanka.
Sida loo raadiyo Faylasha dhamaan Computarada Shabakada Maxaliga ah
Iyada oo xeelado yar la raaco waxaan ka heli karnaa hal ama dhowr faylal meel kasta oo shabakad maxalli ah.
Sida looga tago Meesha banaan ee Windows Desktop-ka marka laga reebo goobta shaqada
Xeelado yar yar ayaan ku muujin karnaa oo kaliya aagga shaqada ee Windows-ka waxaanna ka dhigi karnaa inta kale midab madow oo leh midab gaar ah.
Waa maxay IP iyo xog noocee ah ayey i siin kartaa?
Qodobka halka aan ka ogaanno IP-gu wuxuu yahay, sida loo helo iyo sidoo kale xogta ay na siiso si aadan u seegin wax faahfaahin ah markaad booqanayso shabakadda.
TeamPlayer 2: Sida loo isticmaalo laba jiir hal kombiyuutar
Weligaa ma ku riyootay inaad ku xirto laba ama saddex jiir kombiyuutarka Windows? Haddii aad heli lahayd, waxaad ...
Maareeyaha Bootada Bootka: Kabaha oo wata USB Flash Drive-ka kombuyuutarka oo leh BIOS aan la jaan qaadi karin
Maareeyaha Bootada Bootigu waa codsi naga caawin doona inaan ka bilowno qalliinka usha USB-ga ee kombiyuutarrada leh BIOS aan is-waafaqi karin.
Sida fiidiyowga looga soo saaro cod loona beddelo mid ka duwan
Codsiyo kooban oo kaa caawin doona inaad codka ka soo saarto fiidiyoow isla markaana aad u beddesho qaab kale.
Sida loo ogaado nooca Microsoft .NET Framework ee aan rakibnay
Qaab dhismeedka Microsoft .NET Framework waa madal naga caawin doonta inaan u socodsiino codsiyada qaarkood si hufan, iyadoo kuxiran nooca aan haysanno
Sidee looga soo kabanayaa MBR musuqmaasuq ah oo aan u oggolaan doonin Windows inuu bilowdo
Haddii kumbuyuutarkaaga kumbuyuutarka uusan ku sii bilaabanaynin dhibaatada MBR awgeed, isticmaal mid ka mid ah beddelaadaha aan ku sheegi doonno baloogga.
3 beddel si aad ugu hawlgeliso waxyaabo lagu daro oo aan is waafaqikarin Firefox
Qiyaano yar ayaynu ku haysan doonnaa dhawr dariiqo oo aan ku awoodi karno in aan ka dhigno kuwo la jaan qaadi kara waxyaabo ku rakiban Firefox.
Sida loo qariyo IP-ga
Maqaalka xiisaha leh ee aan si faahfaahsan ugu sharxeyno sida loo qariyo cinwaanka IP-ga si uu awood ugu yeesho in uu internetka ugu dhex maro hab aamin ah oo qarsoodi ah.
KeyLoggers: sida loogu isticmaalo si loo arko waxqabadka kan ugu yar Windows-ka
KeyLoggers waxay waalidku u adeegsan karaan inay kula socdaan mid kasta oo ka mid ah howlaha carruurtooda kumbuyuutarrada gaarka ah ee Windows.
5 Beddelaad loogu talagalay jadwalka xidhitaanka Windows ama dib u bilow
Waxyaabo yar oo beddel ah, waxaan ku barnaamijka barnaamijka kumbuyuutarka Windows si loo xidho, loo seexdo, loo galo hurdo la'aan ama dib loogu bilaabo.
Sidee looga helaa fiidiyowyada, codsiyada ama wax badan oo ka mid ah shabakadda?
Haddii aan adeegsanno xeelado dhowr ah waxaan ka heli karnaa filimo dhameystiran ama codsiyo lagu martigeliyay server-yada P2P gebi ahaanba bilaash.
Khiyaanooyinka lagu daminayo shaashadda kumbuyuutarka markaan rabno
Dhowr tabaha iyo codsiyo gaar ah oo bilaash ah ayaan ku damin karnaa shaashadda kumbuyuutarka intuu wali daaran yahay.
4 Beddelka ah ee lagu Qariyo Hard Drive ama Qeyb Windows
Iyadoo la adeegsanayo tabaha yar iyo aaladaha yar waxaan fursad u lahaan doonnaa inaan ku qarinno warqadda wadista iyo qaybta (ama disk adag) Windows-ka.
MockDop: Qalab Online ah oo lagu abuuro sawir-qaadeyaal caadays ah
MockDrop waa barxad khadka tooska ah ee internetka ah oo naga caawin doonta sameynta sawir-qaadeyaal shaqsiyan leh sawirradeenna oo wata nashqadaha aaladda moobaylka
4 Qalab iyo Beddelaad lagu Tijaabiyo Awoodda Kombiyuutarkaaga Windows
Qalab yar ayaynu ku ogaan karnaa haddii kombiyuutarkeenna Windows-ka ah uu runtii awood badan yahay iyo in kale.
Beddelayaal si loogu beddelo pendrive USB ah muuqaal disk ah
Waxyaabo dhawr ah oo kaa caawin doona inaad u beddesho waxyaabaha ku jira USB-ga oo loo beddelo sawir ISO ah oo ku jira Windows, oo gebi ahaanba bilaash ah
Sida loo raro Windows 7-ka adag ee computer-ka ah adigoon burburin
Xeelad yar ayaynu ku heli doonnaa suurtagalnimada in diskiga adag ee Windows 7 loo raro kombiyuutar gebi ahaanba ka duwan innaga oo aan helin shaashadda buluugga ah.
Sidee loo soo degsadaa faylal badan oo ka socda degellada loo yaqaan 'ftp-like'?
Iyadoo la adeegsanaayo codsiyo bilaash ah iyo tiro cayiman, waxaan kala soo dagsan karnaa faylal kala duwan oo lagu marti galiyay server-yada ftp.
Sida loo soo dejiyo Qeexitaanka Virus-ka ee Antivirus-ka ugu caansan
Dhowr tabaha ayaynu ku soo dejisan karnaa qeexitaanka fayraska ee antivirus-ka ugu isticmaalka badan maanta.
Sida loo habeeyo cabirka daaqadaha Windows
Qalab yar oo naga caawin doona inaanu bedelno cabirka daaqadaha ka shaqeeya Windows sida ku xusan baahiyaheena
LeoCAD: Abuur adduun 3D leh Legos qaabab kala duwan
LeoCAD waa codsi saddex-geesood ah oo naga caawin doona abuurista walxaha 3D iyo xaaladaha iyadoo la adeegsanayo kaliya tirooyinka Lego.
TO.tc: Ka hel URL-yada gaagaaban xiriiriyeyaasha shabakadaha
TO.tc waa aalad onlayn ah oo naga caawin doonta inaan gaabinno URL si aan ula wadaagno saaxiibbadeen ama kuwa raacsan.
Sidee loo abuuraa fiidiyoow otoplay ah oo aan lahayn koodhadh loogu talagalay Windows?
Iyada oo la kaashanayo laba codsi oo bilaash ah waxaan abuuri karnaa fiidiyoow si toos ah ugu ciyaara Windows-ka iyada oo aan loo baahnayn wax koodh ah.
Clipchamp: Ku beddel fiidiyowyadeena shabakadda shabakadda
Clipchamp waa codsi khadka tooska ah ah oo naga caawin doona inaan fiidiyowyadayada u hagaajino si aad u yar yar.
Shan beddel barnaamijka OS X Sawirrada
Qodobka aan ku tusayno shan beddel oo ku saabsan barnaamijka OS X Sawirada oo aad hubaal ka heli doonto mid aad u xiiso badan.
PowerShell: U isticmaal inaad ka tirtirto cusbooneysiinta aan loo baahnayn ee Windows 7
PowerShell waa aalad gudaha ah oo aad u isticmaali karto Windows 7 si aad uga tirtirto cusbooneysiinta khilaafaadka nidaamka qalliinka.
Dropbox hadda waxay kuu oggolaaneysaa inaad faallo ka bixiso waxaad la wadaagto asxaabta
Dropbox wuxuu isku daray muuqaal cusub, kaas oo kaa caawin doona inaad la wadaagto faylasha faallo dheeri ah.
Tor Browser 4.5 wuxuu isku daraa bar siibmaya si loo hagaajiyo asturnaanta daalacashada
Tor Browser wuxuu leeyahay nooc cusub oo hadda wuxuu kordhiyay boodh lagu xiro si loo hagaajiyo daalacashada gaarka loo leeyahay ee bogagga kala duwan.
Ku baaro sawirrada Pinterest bogga oo aan isdiiwaangelin wakhti kasta
Iyadoo la adeegsanayo xeelad yar waxaan iska ilaalin karnaa inaan iska diiwaangelino Pinterest si aan ugu baaro sawirrada ku jira boggaaga shabakadda biraawsarka.
Sida loo tirtiro liisaska Maqaallada Dhawaan ee Ereyga 2010
Microsoft Word badanaa waxay keydisaa liistada maqaallada dhowaan la soo saaray, kuwaas oo lagu baabi'in karo adoo adeegsanaya xeelad yar.